UTİKAD-Turkish Cargo Workshop Ways Agenda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulXalinta ka socota UTIKAD-Turkish Cargo Workshop waxay ku jirtaa Agoosto
10 / 05 / 2017 34 Istanbul, tareenka, GUUD, TURKEY
Wadooyinka Xalka ee Agenda ee UTİKAD-Turkish Cargo Workshop: Aqoon isweydaarsi wada jir ah ayaa waxaa loosoo agaasimay bishii May 4 oo ay soo qabanqaabisay shirkadda Cargo ee Turkiga iyo Ururka Adeegga Gaadiidka iyo Saadka. Aqoon isweydaarsiga, oo ah halka dhibaatooyinka iyo xalalka ay bixiyeen UTİKAD wakaalada xamuul ee xubnaha ka ah xamuulka hawada, Madaxweyne kuxigeenka Fulinta ee Shirkadda Turkish Turhan Özen, maareeyayaasha sare ee Shirkadda Cargo, Gudoomiyaha UTİKAD Emre Eldener, xubno ka tirsan guddiga UTİKAD iyo UTİKAD xubnahooda xamuulka hawada ayaa ka soo qeyb galay aqoon isweydaarsiga.
Aqoon isweydaarsiga ka dib halkaas oo dhibaatooyinka ka jira liiska dhibaatooyinka dhibaatooyinka maandooriyaha ee 27 ay diyaarisay UTİKAD ayaa waxaa si wada jir ah looga wada hadlay soo jeedinta xalka, labo bandhig ayaa laga sameeyay arrimaha kastamka gaadiidka duulimaadka iyo xamuulka hawada ee THY, xamuulka iyo maalgashiga kaabayaasha ee garoonka diyaaradaha ee cusub. Xubnaha UTİKAD sidoo kale waxay fursad u heleen inay si dhow u baaraan xarunta iyo xamuulka xamuul ee Turkiga. Dhamaadka aqoon isweydaarsiga hufan, waxaa la go'aamiyay in la sii wado raadinta xalka guud.
Ururka Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee UTİKAD iyo Shirkadda Cargo ee Turkiga ayaa wada saxiixday aqoon isweydaarsi wadajir ah. Gudoomiyaha UTMAD Emre Eldener, UTİKAD Gudiga Agaasimayaasha Gudoomiyaha Turgut Erkeskin, UTİKAD Gudiga Agaasimayaasha. Xubin ka mid ah guddiga iyo gudoomiyaha kooxda shaqo ee shirkadda diyaaradaha Mehmet Özal, Xubnaha guddiga UTİKAD İbrahim Dölen, Serkan Eren, Rıdvan Haliloğlu, maareeyaha guud ee UTİKAD Cavit Uğur iyo wakaalada xamuul ee UTİKAD xubnahan ayaa ka soo qeybgalay.
Xubnaha Gudiga UTİKAD, 6 Diseembar 2016 wuxuu booqday maareeyaha guud ee shirkadda 'THY Bilal Ekşi' xafiiskiisa, wuxuu soo bandhigay rabitaankooda guusha wuxuuna u sheegay dhibaatooyinka hay'adda UTİKAD xubnahooda xamuul. Codsiga Maareeyaha Guud ee Shirkadda Diyaaradaha Turkishka Ekşi dhibaatooyinka hey'adaha xamuulka hawada ayaa qoraal ahaan loogu ogeysiiyay THY. Ka dib Maareeyaha Guud Ekşi, UTİKAD Ergada ayaa booqday Turhan Özen, oo loo magacaabay inuu noqdo Ku-Xigeenka Maareeyaha Guud ee mas'uulka ka ah Shirkadda Turkish Airlines Cargo 5 Janawari 2017.
4 Aqoon isweydaarsiga, oo dhacay bishii May oo soo jiidatay xiisaha weyn ee hay'adaha UTİKAD ee xamuulka hawada, wuxuu ku bilaabay khudbadda kuxigeenka Maareeyaha Guud ee Shirkadda THY Turhan Özen. Caawiyaha Guud ee THY emphasizedzen wuxuu carabka ku adkeeyay in hay'adaha xamuulku ay muhiimad weyn u leeyihiin THY; Bu Aqoon-isweydaarsigaan, oo aan ku ogaanay anagoo kaashanayna UTİKAD, muhiimad weyn noo leh annaga. Waxaan si wada jir ah uga shaqeyneynay xallinta dhibaatooyinka aan go aansanay in muddo ah. Maanta, waxaan la wadaagi doonnaa talaabooyinka xalka aan u nimid sida Cargo Turkish ah liiska dhibaatooyinka la diyaariyey iyadoo lala tashanayo hay'adaha xubnaha UTİKAD. ”
Guddoomiyaha UTİKAD Emre Eldener, oo sagxadda qaatay ka dib Özen, Kaaliyaha Maareeyaha Guud, ayaa carrabka ku adkeeyay muhiimadda aqoon isweydaarsiga. Madaxweynaha UTİKAD Eldener wuxuu tilmaamay in howshu ay dardar galisay kadib markii Turhan joinedzen ay ku biirtay THY Kargo xalinta dhibaatooyinka farsamada iyo howlaha ay soo mareen xubnaha UTİKAD. “Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo isaga iyo kooxdiisa taageeradooda. Muhiimadda ay u leedahay arrinta ayaa laga arki karaa xaqiiqda ah inay leeyihiin shaqaale buuxa oo halkaan ku maareeya. Intaa waxaa sii dheer, joogitaanka wakaaladaha xamuulka xubnaha ka ah UTİKAD oo kaqeybgal ballaaran leh ayaa muujineysa ahmiyada si weyn loo siiyay arinta.
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in liisaska dhibaatooyinka ay ku jiraan Qodobka 27 qodobka waxaa lagu diyaariyey soojeedinta labada maareeyayaasha xamuulka hawada ee shirkadaha xubinta ka ah iyo shaqaalaha xafiiska maddaarka ee Kooxda UTİKAD ee Kooxda Shaqada, Eldener ayaa yidhi, üzerinden Waxyaabahan ayaa mid mid u gudbay waxaanan yeelanay shirar dhexdhexaad ah. Kulamadaas, UTİKAD waxay goob joog ka ahayd sida firfircoon ee THY Kargo u xallinayso mashaakilka. Kulankan, waxay ku bixin doonaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhibaatooyinka aan u gudbinay iyaga iyo xalalkooda. Mar labaad dhamaadka kulankan, waxaan fursad u yeelan doonnaa inaan ka hadalno waxa sugaya wakaalada xamuulka iyo THY Cargo iyadoo loo wareejinayo garoonka cusub dhamaadka dhamaadka 2018.
THY Eldener tilmaamaysa in muhiimadda ugu weyn ee wakiilada xamuulka hawada UTIKAD xubin xamuulka, "ku saabsan xubnaha ku jira account UTIKAD 95% oo xamuul guud hawada dalka Turkiga, kaas oo la abaabulo hay'adaha. Waqtigan xaadirka ah, annagoo ah xamuul xamuul oo duulimaad qaran ah, waxaan aaminsanahay in tartan bilaash ah ay tahay in lagu hubiyo xaalado cadaalad ah iyo eex-la'aan ka dhexeysa hay'adaha waa iney ilaaliyaa THY Kargo. Waxaan aaminsanahay in howlaha wakaalada xamuulku ay tahay in lagu tixgaliyo howshan. UTİKAD waxay diyaar u tahay inay iskaashi la sameyso THY Kargo sidii loo cirib-tiri lahaa dhammaan noocyada calaamadda su’aal ee ku saabsan arrimahan. ”
Kadib khudbadii Madaxweynaha UTİKAD Emre Eldener, Madaxweyne kuxigeenka Cargo Cargo Halit Naran wuxuu sameeyay soojeedin ku saleysan mabaadii'da shaqada iyo xogta sanadlaha ah ee Cargo Turkish. Isagoo ka waramaya in tirada diyaaradaha xamuulku ay kordhayaan muddada soo socota, Naran wuxuu kaloo la wadaagay macluumaadka in meeliyo cusub laga furi doono Afrika.
Khudbadihii furitaanka kadib, aqoon isweydaarsiga waxaa dhexdhexaadiyay Maamulaha Maareynta Cargo Cargo ee Turkiga Ahmet Kaya. Intii uu socday aqoon-isweydaarsiga, Mehmet Özal, xubin ka tirsan guddiga UTİKAD iyo Gudoomiyaha Kooxda Shaqeynta Duulista, Suuqa Cargo Cargo ee Turkiga iyo Maareeyaha Iibka Ömer Faruk Kılıç, Maamulaha Gawaarida Gaarka ah Bahadır Büyükkaymaz, Maamulaha Isku-xirka Cargo Volkan Solmaz, Maareeyaha Istanbul Murat Yalçın Kırca iyo Maareeyaha Qorsheynta Awoodda Xamuulka Cargo Furkan Özüdoğru wuxuu ku biiray mashruucan.
Saraakiisha ugu sareysa dalka Turkiga ee Cargo ayaa shaaciyay talooyinka xalka ee dhibaatooyinka ku taxan liiska shayga 27 ee ay diyaarisay UTİKAD. In kasta oo la sharraxayo qorshayaasha waxqabadka ee xamuulka Turkiga ee xalka dhibaatooyinka, waxaa la siiyay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan suuqgeynta, xamuulka qaaska ah iyo howlaha xamuulka ee xamuulka xamuulka Turkiga. Intii lagu guda jiray aqoon isweydaarsiga, wakiilada wakaalada xamuulka hawada xubnaha ka ah UT memberKAD waxay ka jawaabeen su'aalaha kusaabsan howlaha iyo dhibaatooyinka.
Dhamaadka aqoon isweydaarsiga, xubin ka tirsan Gudiga UTİKAD iyo Madaxa Kooxda Shaqada Hawada Mehmet Özal ayaa yiri, orum waxaan rabaa inaan qeexo aqoon isweydaarsigaan oo ah hooyada aqoon isweydaarsiga xiga waxaanan taageersanahay soo jeedinta Turhan Bey ugu yaraan hal mar sanadkii. Wadashaqeynta iyo shaqada udhaxeysa THY iyo UTİKAD aad bey muhiim u tahay maxaa yeelay waxaan ku jirnaa xili isbadal ah oo aan ku koobneyn kaliya isbedelada siyaasadeed ee ka jira gobolka, dalkeena, laakiin sidookale waaxda. Haddii aan nahay UTİKAD, waxaan raaceynaa arrimo badan oo qaabayn doona qaababkayaga ganacsi xilliyada soo socda oo matali doona waaxdeena labada dhinacba iyo kuwa caalamiga ahba. ”
Mehmet Özal, oo isaguna ku jira ajandaha UTİKAD isla markaana isagu isna qaatay talaabadan, ayaa yidhi, "Waxaan si dhaw ula soconaa arrimaha Wershadaha 4.0, digitalization, e-Freight, hababka e-AWB, rarka iyo dukumintiga gabi ahaanba waan ka go'nay midba midka kale. Gegada diyaaradaha ee cusubi waxay saameyn ku yeelan doontaa waaxda duulista hawada ee Turkiga iyo howlaheeda, halkaasoo labadaba IGA iyo dhammaan saamileyda, adeegyada dhulka, shirkadaha diyaaradaha, IATA iwm. Wadatashiga, waxaan sii wadnaa xiriirkeena si aan kor ugu qaadno hufnaanta howlaha xamuulka. Iyada oo la adeegsanayo Mashruuca "One-Way One-Belt" ee Shiinaha, duullimaadyada 14 ee Shiinaha ayaa imanaya Yurub, waqtigana waxaa loo qorsheeyay in lagu yareeyo 11. Tani waxay si aan macquul aheyn u saameyn doontaa warshadaha duulista waxaan u baahanahay inaan horumarino dhaqso, dabacsanaan badan, kalsooni badan, adeegyo tartan badan.
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in UTİKAD ay sii wado howlaheeda iyada oo ah xubin joogto ah oo xubin ka ah Guddiga Fududeynta Ganacsiga, Özal wuxuu yidhi, "Isla mar ahaantaana, waxaan door firfircoon ka qaadnaa howlaha la xiriira arrinta Sharciga Kastamka cusub iyo Shahaadooyinka Ogolaanshaha ee Wasaaradda Gaadiidka. Waxaan iskaashi la yeelanay THY si aan u sameysanno ra'yi guud oo ku saabsan horumarinta hannaanka caadooyinka. SHGM iyo SHT 17.6 iyo qawaaniin kale oo la xiriira waaxda si ay uga qeybqaataan shaqada. Istanbul SOP ayaa laga aqbalay kulanka lala yeeshay ACC, IATA iyo wakiilada xubnaha UTİKAD ee ku saabsan E-AWB shalay. Waxaan ku martiqaadeynaa dhammaan xubnaheena inay heshiisyo badan la galaan IATA oo ay ku soo biiraan nidaamka. Waxaan sidoo kale qaban doonnaa shirarka macluumaadka e-AWB maalmaha soo socda. ”
Aqoon isweydaarsiga ka dib, Maareeyaha Kastamka Cargo ee Turkiga Seyfullah Topal wuxuu soo bandhigay khudbad ku saabsan arrimaha kastamada ee gaadiidka hawada. Mawduuc, "UTİKAD waxay muhiimad weyn u leedahay howshayada nala socota," ayuu yidhi. Maareeyaha Howlgallada Cargo Cargo ee Turkiga Adnan Karaismailoğlu, oo sagxadda qaatay ka dib Topal, ayaa la wadaagay ka qeybgalayaasha dhibicdii ugu dambeysay ee Shirkadda Cargo ee Turkiga.
Aqoon isweydaarsiga ka dib, kaqeybgalayaasha qadada ka qaatay xarumaha xamuulka Cargo ee Turkiga waxay fursad u heleen inay soo booqdaan xarunta iyo goobta.